I-Prairie Barn Cabin - e-Iola, e-Iola - I-Airbnb
I-Prairie Barn Cabin - e-Iola, e-Iola
Uvimba sinombuki zindwendwe onguOlivia
I-Prairie Barn Cabin yivaranda eneminyaka eyi-120nangaphezulu enemiqadi ebonakalayo kunye nomtsalane wefama yale mihla. Indlu yamaplanga ilala kamnandi abantu abayi-4 inamagumbi okulala ayi-2 aneebhedi ezinkulu, isitovu seenkuni sangaphakathi esitofotofo, ikhitshi elinento yonke elilungele ukutya nendawo yokuhlamba iimpahla. Bukela izilwanyana zasendle zasehlathini ezingqonge indlu yamaplanga ekumgama weemayile eziyi-3 kumantla weIola, eJamani.
Indlu yamaplanga, indawo yokubasa, kunye ne-zip line. Abantwana bamkelekile ukuba basebenzise ibala lokudlala.
55" HDTV ene-I-Hulu, I-Netflix, I-HBO Max, I-Disney+
Indlu eyi-5 acre esehlathini. Indlu inikwa intsapho nezilwanyana zasekhaya zababuki zindwendwe. Le ndlu ingqongwe ngumhlaba wefama. Iikati, iinkukhu, kunye nepodle yethu enobuhlobo zihamba ngokukhululekileyo kwifama.
Ndiyakuthanda ukuncokola nawe kodwa ndithanda ukuvumela undwendwe ukuba lukhokele ukuba lungathanda ukudibana ubuso ngobuso ukuze ndingazibeki izinto eziyimfihlo. Uhlala wamkelekile ukubuza nayiphi na imibuzo okanye utyelele nam. Ndifumaneka ngomyalezo okanye ndifowunelwe ukuba ufuna nantoni na
Ndiyakuthanda ukuncokola nawe kodwa ndithanda ukuvumela undwendwe ukuba lukhokele ukuba lungathanda ukudibana ubuso ngobuso ukuze ndingazibeki izinto eziyimfihlo. Uhlala wamkelekil…